Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Entertainment » Circus na Northern Ireland gwụsịrị na clowns
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Entertainment • Music • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụghị mmadụ niile na -enwe mmasị ka a na -achị ọchị mana maka onye na -eme ihe ọchị, ihe nro kachasị njọ ga -abụ ka a ghara ịchị gị ọchị.
Oké ụkọ ihe mberede COVID-19 na-emetụta ụlọ ọrụ circus nke Northern Ireland.
Clowns na -achọsi ike ga -eme ihe karịrị ịchacha onwe ha na etemeete na lob custard pies iji mejupụta akpụkpọ ụkwụ dị ukwuu nke ọrụ ha.
Ịbụ onye omebe iwu ga -enwerịrị ike ịchị onwe gị ọchị - ọ bụghị maka ịkpa ndị ọzọ ọchị.
Circus ga -agagharị na Northern Ireland ọzọ otu ugboro Mgbapụta COVID-19 nwere ahụ iru ala, mana dị ka akụkọ akụkọ Britain si kwuo, ha na -eche oke ụkọ ihe nkiri ihu, ndị isi ọgbọ egwuregwu na -agbasi mbọ ike ịchọta ndị na -eme ihe nkiri ọhụrụ.
Site ugbu a, ụwa niile maara UKNsogbu mmanụ ụgbọala na -aga n'ihu, mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ghọtara na ụkọ ụkọ ihe egwu dịkwa Northern Irelandọgbọ egwuregwu.
Ọtụtụ n'ime ndị na-eme ihe nkiri a laghachiri na obodo nke ha na mbido oria ojoo COVID-19 n'afọ gara aga, ma ọ bụ gaa mba ọzọ ịchọ ọrụ na mba ndị mepere emepe.
Site na usoro visa maka ndị na-abụghị EU na-agbagwoju anya, ndị nwe ọgbọ egwuregwu na-anwa ịbịakwute ndị ọ bụla nọ n'ụlọ chere na ha nwere ike inye ya ohere.
Clowns na -achọsi ike ga -eme ihe karịrị ịchacha onwe ha na etemeete na lob custard pies iji mejupụta akpụkpọ ụkwụ dị ukwuu nke ọrụ ha. Dị ka otu onye nwe ọgbọ egwuregwu si kwuo, mgbe ị banyere na mgbanaka circus ma nwee mmadụ 700 ruo 800 na -ele gị anya, n'agbanyeghị ụdị ọnọdụ ị nọ na ya, ị ga -amụnye mgbanaka circus ahụ. Ị ga -enwerịrị ike ịgụ ndị na -ege gị ntị, n'ime nkeji ole na ole, ị ga -enwe ike nweta mmekọrịta gị na ha wee mekọrịta ma nye ha nri.
Ọ bụ ezie na njakịrị na -ede onwe ha, azụmahịa ịkpa ọchị abụghị ihe ọchị, ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na -ekwu, sị: “Ọ bụghị mmadụ niile na -enwe mmasị ka a na -achị ya ọchị mana maka onye na -eme ihe ọchị, nrọ ọjọọ gị kacha njọ agaghị abụ onye a na -achị ọchị. “
"Ị ga -enwerịrị ike ịchị onwe gị ọchị, ọ bụghị maka ịkpa ndị ọzọ ọchị."